Semalt Inotsanangura Maitiro Okubvisa Dhairiro Inodiwa Kubva HTML Websites
Nyaya yakawanda yemashoko akaiswa mumambure inoonekwa se "isina kusimbiswa" nokuti haina kurongeka zvakanaka. HTML mawebhusayithi akasiyana nenzira iyo yaive nemagwaro akakurumbira, uye mharidzo inowanikwa mumagwaro acho yakarongeka mukati meHTML code.
Pane zvitatu zvemashoko makuru ekutsvaga kubva kumawebsite eIndaneti:
Kuchengetedza zvinyorwa zviri papeji yewebhu kune kombiyuta yako;
Kunyora kodhi yekutora deta;
kushandisa zvishandiso zvakasiyana-siyana;
1. Nzira yekubudisa HTML kubva pawebsite pasina coding
Unogona kuongorora peji yebhu zvinyorwa uchishandisa matanho anotsanangurwa pasi apa:
Mushure mekuvhara peji yepawebhu ine zvinyorwa zvamunoda, tsanangurira kurudyi uye sarudza "Chengeta Peji", kana kuti "Chengeta". Tora zita refaira mu "File Name" munda uye kubva pane "Dhidzira Sezvakanyorwa" Sezvakaderera pasi, sarudza "Web Page, HTML chete - steroids for sale. "Dharira" Bhokisi "rega uye tarisira mashomanana mashomanana.
Zvose zvinyorwa zviri papeji iyoyo zvinobudiswa uye zvichengetwa se HTML file. Mavambo ekutanga-maitiro ekugadzirisa anoramba asina kumira, uye iwe unogona kugadzira zvinyorwa mumashoko akawandisa seNepepad.
Kubudisa peji yose yewebhu
Sarudza "Chengetedza" kana "Chengetai Peji" sarudzo mu "File" menu. Zvadaro, chengeta "Peji Yepamusoro, Ita" kubva pane "Dhidza seTepe" yemenyu inodonha. Mushure mekunyora "Chengeta," mifananidzo nemifananidzo zvichabudiswa kubva peji uye zvichengetedze kupi zvako kwaunoda. Mashoko acho akaiswa mu HTML file apo mifananidzo iri kuchengetwa mufaira.
2. Kubvisa HTML kubva kune webhusaiti uchishandisa coding
Unokwanisa kushanda zvakananga neHTML mafaira uchishandisa zvishandiso zvinokosha. Uyewo, unogona kugadzira kodeti kuti ubvise ma HTML tags uye chengetedza mavara ari mu HTML mafaira uchishandisa XPath kana nguva dzose inoratidza. Mamwe emitauro yakakurumbira zvikuru yekuita basa iri inosanganisira Python, Java, JS, Go, PHP uye NodeJs.
3. Kushandisa webhutape data zvidhinha zvishandiso
Kana iwe uchida kubvisa mafaira e HTML kubva pawebsite usina kunyora mutsara mumwechete wekodhi kana kudzivisa kutambudzwa kwekopi uye nzira yekubatanidza, shandisa web scraping zvishandiso. Muzvokwadi, pane zvinhu zvakawanda zvinobatsira zvinogona kukohwa ruzivo rwakakosha kubva kune webhusaiti uye zvino kuchinjwa kuti ive yakarongeka. Ingoedzai mashomanana akachera chigoni s, uye iwe zvechokwadi uchawana iyo yakakosha zvakanyanya pakutsvaga kwako.